Moments Neshamwari 6
Mukutaura zvezvinhu zvakakosha shamwari inobvunza: Chii chaicho chirevo chezwi rechirevo chezwi, chinoshandiswa muhuwandu hwekubatanidza ne theosophists nemashiripiti?
Chinhu chechisungo chiumbwa pasi pechikamu chemunhu; muviri wechinhu unoumbwa nechimwe chezvinhu zvina izvi. Saka izwi rekutanga. zvinoreva kana kuve wezvinhu zvemukati. Vazivi venhau vanozivikanwa sevaRosicrucians vakakamura zvinhu muzvikamu zvina, zvichienderana nekirasi imwe neimwe yezvinhu zvina zvakabatwa navo pasi, mvura, mweya uye moto. Zvirokwazvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti aya maumbirwo haana kufanana nezvinhu zvedu zvakashata. Pasi, semuenzaniso, hazvisi izvo zvatinoona zvakatikomberedza, asi chinhu chakakura icho chakavakirwa pasi redu rakasimba. The Rosicrucian's akatumidzwa elementals epasi, gnomes; izvo zvemvura, marangi; idzo dzemhepo, nhunzi, uye izvo zvemoto, salamanders. Ipo pacho chikamu chechimwe chezvinhu chakapihwa nhungamiro nekufunga kwakadzama kwemunhu, pfungwa iyi inotora chimiro muuyo wechimiro chechimiro chayo uye ichibva yaoneka seboka rakaparadzaniswa nechinhu, asi muviri wake uri wechinhu icho. Izvo zvinhu zvisiri izvo zvakagadzirwa nemafungiro emunhu munguva ino yekushanduka kwekufungidzira kuve kwavo, nekuda kwemafungiro enguva yekutanga yekushanduka. Iko kusikwa kwechinhu chechikonzero kuri nekuda kwepfungwa, kwevanhu kana kwepasirese. Zvinhu zvekutanga zvinozivikanwa sevhu elementals zviri mavari zvemakirasi manomwe, uye ndeiya anogara mumapako nemakomo, mumigodhi nenzvimbo dzese dzepasi. Ivo ndivo vavaki vepasi nezvigadzirwa zvaro pamwe nesimbi. Iyo mayines inogara muzvitubu, nzizi, makungwa, uye munyoro wemhepo, asi zvinotora musanganiswa wemvura, wemhepo uye wemukati elementals kuti ubudise mvura. Muzhinji zvinotora mubatanidzwa wemakirasi maviri kana anopfuura ezvipenga kuti ubudise chero chinhu chakasikwa. Saka makristasi anoumbwa nekusanganiswa kwepasi, mhepo, mvura uye moto elementals. Saka ndozvakaita nematombo anokosha. Nhunzi dzinogara mumhepo, mumiti, mune maruva esango, mumakwenzi, uye muumambo hwese hwezvirimwa. Ma salamanders ndeemoto. Murazvo unouya nekuvapo kuburikidza nekuvapo kwe salamander. Moto unoita kuti salamander ionekwe. Kana paine murazvo tinoona chikamu chimwe che salamander. Zvinhu zvemoto ndizvo zvinonyanya kushanda. Izvi zvina zvinobatana pamwe chete mukugadzira moto, dutu, mafashama uye kudengenyeka.
Chii chinorehwa neyekuti 'munhu wepanyama?' Pane musiyano uripo pakati payo nepfungwa yepasi?
Chinhu chomunhu chinhu icho chakabatana nemurume paakatanga kuvapo mumuviri uye chaanobatana nacho nemuviri mumwe neumwe pakuvakwa kwemuviri wake. Inopfuurira kuburikidza nemukati mese wepfungwa kusvika iyo, kuburikidza nekubatana kwenguva refu nepfungwa, inogamuchira checheche kana ray yekuzviziva. Izvo hazvisisiri izvo zvevanhu, asi pfungwa dzakaderera. Kubva pamunhu elemental panouya linga sharira. Chikamu chemunhu ndicho chiri muMadame Blavatsky "Chakavanzika Dzidziso" chinodaidzwa kuti "bharishad pitri," kana "tateguru wemwedzi," nepo murume, Ego, ari weagagaswatta pitri, wedzinza rezuva.
Pane pane chekutanga chekutonga zvishuvo, imwe yekudzora masimba anokosha, imwe yekudzivirira mabasa emumuviri, kana kuti munhu wekutanga anotonga zvose izvi?
Chinhu chomunhu chinotonga zvese izvi. Iyo linga sharira ndiyo automaton iyo inotakura zvido zvehunhu hwevanhu. Iyo bharishad pitri haife pamwe nerufu rwemuviri, sezvinoita linga sharira. Iyo linga sharira, mwana wayo, inogadzirwa kubva mairi nekuda kweumwe neumwe muviri. Iyo bharishad yakafanana naamai iyo inoshandiswa pamusoro nepfungwa yekuzvarwa patsva kana Ego, uye kubva pachiito ichi inogadzirwa linga sharira. Chinhu chevanhu chinodzora mabasa ese ataurwa mumubvunzo, asi basa rega rega rinoitwa nechinhu chakasiyana. Chinhu chechinhu chega chega chemuviri unoziva uye chinotonga hupenyu hwoga hunoenda kunogadzira icho chiya, uye chinoita basa rayo, asi hapana chaanoziva chero basa reimwe nhengo, asi chinhu chomunhu chinoona kuti ese aya mabasa anoitwa. uye inoenderana kune mumwe nemumwe zvakabatana. Zvese zvekungozviita zvemuviri zvakadai sekufema, kugaya, kuputika, zvese zvinodzorwa neyemunhu elemental. Iri ndiro basa rebhudhiri mumuviri wenyama wemunhu elemental. Mu Runyorwa pa “Consciousness,” Shoko, Vol. Ini, peji 293, zvinonzi: “Chechishanu mamiriro ezvinhu ipfungwa dzemunhu kana kuti ini ndiri-ini. Mukati memazera asingaverengeke, iyo isingaverengeki atomu iyo yakatungamira mamwe maatomu kupinda mumineral, kuburikidza nemiriwo, uye kusvika kune mhuka, pakupedzisira inosvika yakakwirira mamiriro ezvinhu mune iyo inoratidza imwe Kuziva. Kuve chinhengo chemunhu uye kuva neiratidziro yeConsciousness mukati, inofunga uye inotaura pachayo seni, nekuti ndiri chiratidzo cheIye. Sangano remunhu rine pasi pekutungamira kwayo yakarongeka muviri wemhuka. Chikamu chemhuka chinomanikidza imwe neimwe yenhengo dzayo kuita rimwe basa. Chikamu chechikamu chimwe nechimwe chinotungamira rimwe rayo maseru kuita rimwe basa. Hupenyu hweesero rega rega rinotungamira yega yega mamorekuru kukura. Magadzirirwo emorekuru imwe neimwe anobatanidza imwe neimwe maatomu ayo kuita fomu yakarongeka, uye Kuziva kunosimbisa atomu yega yega nechinangwa chekuzviziva. Maatomu, mamorekuru, masero, nhengo, uye mhuka, zvese zviri pasi pekutungamirirwa kwepfungwa-mamiriro ekuzviziva mamiriro ezvinhu-iko basa rinofungwa. Asi pfungwa hadziwane kuzviziva, iko kukura kwayo zvizere, kudzamara kwave kukunda uye kwakadzora zvishuvo zvese nemafungiro akagamuchirwa kuburikidza nemanzwiro, ndokuisa pfungwa dzese paConsciousness sezvinozviratidza pachezvayo. muviri sekunge aginnwatta pitri ndiye mweya wefungwa. "Pane chekutanga chiri kudzora zvishuwo here?" Kwete. Iyo rupa ine hukama hwakafanana neiyo Ego sezvinoita iyo linga sharira kune munhu wekutanga. Chete nepo linga sharira iri automaton yemuviri, the like rupa ndiyo automaton yeiyo mhirizhonga zvishuwo zvinofambisa nyika. Zvido zvepasirese zvinofambisa akada rupa. Chese chinopfuura elemental chinopinda mukati kunge rupa. Saka iyo linga sharira inofambiswa uye inofambisa muviri maererano neyakaremerwa kana mirairo yechinhu chemunhu, iyo kama rupa, kana iyo Ego.
Izvo chete izvo zvinotungamira zvekutonga zvose zvirikuziva uye mabasa asingaziviki emuviri?
Iko hakuna chinhu chakadai sekusaziva chinhu basa kana kuita. Nekuti kunyangwe iye munhu anga asiri kuziva mabasa kana zviitwa zvemuviri wayo, iyo inotungamira yeiyo nhengo kana basa racho zvechokwadi rinoziva, zvimwe raitadza kushanda. Izvo zvakafanana elemental hazviwanzoita ese mabasa kana zviito zvemuviri. Semuenzaniso, chimiro chemunhu chinotungamira muviri wese kana chingave chisingazive kupatsanuka uye chiito chega chega cheblue ropa.
Ndezvipi zvinyorwa mumasangano makuru anobuda, uye ivo vose here kana kuti chero chipi zvacho chavo munguva yekushanduka-shanduka kuva varume?
Mhinduro iri hungu kumibvunzo yacho yose. Muviri wemunhu ndiyo imba yechikoro yezvose elemental. Mumuviri wemunhu makirasi ese ezvese zvepasi anogamuchira zvidzidzo zvavo uye kuraira; uye muviri wemunhu ndiyo yunivhesiti huru kubva mairi vese vanopedza zvidzidzo vanopedza ma degree avo. Chinhu chomunhu chinotora danho rekuzviziva uye mukutendeuka kwaro ipapo, seEgo, inotungamira pane imwe elemental inova yemunhu, uye zvese zvepazasi elemental, kunyange sezvinoita Ego mumuviri zvino.